Kunakidzwa neLogos ... Indy Kashop Shops | Martech Zone
Vaya venyu vakaverenga bhurogu yangu kwechinguva vanoziva ini ndinoda mukombe mukuru wekofi. Shamwari dzangu dzenzvimbo dzinoziva kuti ndinoda kufambidzana nechikwata pa Mukombe weBean. Iyo inonakidza shopu yekofi… chikafu chikuru, vanhu vakanaka, mimhanzi mhenyu uye yakawanda yemacheya akasununguka uye kamuri.
Yemunharaunda Indy waanoshanda naye Erik Deckers akanyora nezvezvitoro zvekofi zvakazvimirira pano uye akatovaka yake Google Mepu kuratidza vanhu iko iyo zvitoro zvekofi zvakazvimiririra zviripo.
Sezvo ini ndichangopedza kuvhura iyo alpha vhezheni yeiyo Mepu yekushandisa yeWild Birds Unlimited, Ini ndakapa kubatana naErik pane saiti yekutevera nekutarisira yemuno Independent Kofi Shops. Manheru ano ndashanda pachiratidzo ... ini handisi graphic muimbi uye ndinoda kubiridzira uye kutanga nehumambo yemahara clipart - asi ini ndinofunga ichi kutanga kwakanaka! Ini ndinodhonza clipart muIllustrator uye ndobva ndangowedzera mamwe matete ane iwo akafanana dhizaini.
Vector Clipart yeMufananidzo
Heino zano rimwe rako, Microsoft Clipart is chaizvo vector yakavakirwa uye unogona kushanda nayo mu Illustrator. Icho hunyengeri kuendesa clipart mu Microsoft application iyo inokutendera iwe kutumira iyo clipart mune fomati iri Illustrator-inoshamwaridzika. Microsoft Visio chimwe chigadzirwa chakadai.
Tsvaga saiti yeIndiapolis yakazvimirira kofi zvitoro kuti utange munguva pfupi, pamwe neyedu beta yemepu yedu yekushandisa nokuti Shiri Dzesango Dzisingagumi, Yakabatanidzwa neiyo yavo franchise zvemukati manejimendi system.
Tags: atymmutengo we seochaizvoyakawanda zvakadii seohubspotinbound Marketing agencymarketomutengo we seoseomozSlider
Mbudzi 29, 2007 na7: 35 PM
Ini ndinopa iyo 9 kunze kwe10 Kwete kushata kune yakajeka giraidhi uchishandisa clipart. 😉
Kunyangwe, ini ndinofunga iwe unofanirwa kufambisa mumvuri padyo nekombe, saka unodzivirira iyo UFO-inoyerera kofi kofi kutarisa.
Mbudzi 29, 2007 na8: 21 PM
Ive neshuwa yekutarisa iyo Monon Kofi Kambani kana iwe uri muBroad Ripple nzvimbo. Izvo zviri mumoyo we Broad Ripple uye inopa inodziya, inoshamwaridzika mamiriro. Pamusoro pazvo zvese, vaviri vevaridzi vanhu vandinoshanda navo kuWild Birds Unlimited! Izvo sei zvekubatana?!
Dec 18, 2007 pa 8: 30 AM
Basa rakanaka murume! Ndingadai ndakadada kuti ndauya neizvozvo.
Dec 18, 2007 pa 8: 41 AM